इन्स्टाग्राम कथाहरू सर्वेक्षण गर्ने सम्भावना थप गर्दछ ग्याजेट समाचार
इन्स्टाग्राम एक सामाजिक नेटवर्क हो जुन जनतामा सब भन्दा बढि बूम छ। हाम्रा अनुयायीहरूसँग छविहरू साझा गर्नु जनताको लागि दावी हो। र इन्स्टाग्रामले प्रस्ताव गरेको कार्यहरूमध्ये इन्स्टाग्राम स्टोरीहरू हो। यसले अनुमति दिन्छ भिडियो साझा गर्नुहोस् जुन उनीहरूको प्रकाशनको २ hours घण्टा पछि मेटाइन्छ खाताबाट यस प्रकार्यलाई प्रयोगकर्ताहरूले ठूलो स्वीकृति दिएका छन् र अब नयाँ सम्भावना थपिएको छ: आचरण सर्वेक्षणहरू.
तपाईं सन्देशहरू पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ, स्टिकर, लि and्कहरू र अब तपाईं आफ्नो दर्शकहरू बीच सर्वेक्षण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्रामले अनुयायीहरूको सहभागितामा शर्त लगाउने निर्णय गरेको छ। अब देखि, भिडियोमा अधिक टिप्पणीहरू - वा अधिक प्रतिक्रियाहरू - जब प्रकाशित हुन्छन्। अहिले, बीचमा स्टिकर तपाईंको भिडियो सिर्जनामा ​​पनि राख्नको लागि संभव छ तपाईं सर्वेक्षण घुसाउन संभावना छ.
तपाइँको "कथाहरू" मा सर्वेक्षण राखिसकेपछि, अनुयायीहरू विकल्पहरू छनौट गर्न सक्षम हुनेछन् जुन उनीहरूलाई सब भन्दा चासो लाग्छ। थप रूपमा, तिनीहरू वास्तविक समयमा हेर्न सक्षम हुन्छन् नतीजाहरू के हुन्छन्। यो प्रकार्य चाखलाग्दो हुन सक्छ, केवल निजी प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र होईन, तर कम्पनीहरूका लागि पनि; छ तपाइँको लक्षित श्रोताको राय के हो भनेर पहिलो हातले थाहा पाएर बेट गर्नको लागि उत्तम तरिका। र हामी सम्झन्छौं कि अधिक र अधिक ब्रान्डले तस्विरमा वा भिडियोहरूमा उनीहरूका उत्पादनहरू सार्वजनिक गर्न इन्स्टाग्राममा शर्त लगाइरहेका छन्।
अर्कोतर्फ, सर्वेक्षणको निर्माताले मात्र आफ्नो औंला स्लाइड गर्नुपर्दछ परिणामहरू अझ विस्तृत रूपमा जान्नको लागि। र यो मात्र होइन तपाईं प्रत्येक विकल्पका लागि मतदाताहरूको प्रतिशत जान्न सक्नुहुनेछ, तर हेर्नुहोस् कुन अनुयायीहरूले भाग लिएका छन् र कुन विकल्प छनौट गर्दछन्। अवश्य पनि, तपाइँले दिमागमा राख्नुपर्दछ कि इन्स्टाग्राम कथाहरू भिडियोको रूपमा, सर्वेक्षणहरू र उनीहरूको डेटा २ 24 घण्टा पछि गायब हुनेछन्।
अन्तमा, इन्स्टाग्रामले पनि इन्स्टाग्राम कथाहरूमा दुई नयाँ सम्पादन उपकरणहरू थपेको छ। अब तपाईं सक्नुहुन्छ पाठ र ब्रशेसको रंग छनौट गर्नुहोस्। थप रूपमा, केहि गाईडहरू lब्लू लाइनहरू— तपाइँको ठाँउ पाउन उत्तम ठाउँ कहाँ छ भनेर सुझाव दिनेछ स्टिकर। यसले तिनीहरूलाई लुक्नबाट रोक्दछ जब अनुयायी तपाईंको नयाँ भिडियो कहानी जाँच्न जान्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सामाजिक नेटवर्क » इन्स्टाग्राम कथाहरू सर्वेक्षण गर्ने सम्भावना थप गर्दछ
बच्चाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो भिडियो साइटहरू